University of Glasgow - Fianarana in United Kingdom, Education Rahalahy
fanafohezan-teny : Corner
Créé : 1451
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Glasgow
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow
The University of Glasgow no fahefatra oniversite tranainy indrindra amin'ny faha-eEnglish miteny izao tontolo izao, ary ny anankiray ny efatra Ekosy oniversite fahiny. Efa naorina tao 1451. Miaraka amin'ny University of Edinburgh, ny University dia anisan'ny Scottish Fahazavana nandritra ny taonjato faha-18. Tsy amin'izao fotoana izao ny mpikambana ao Universitas 21, ny iraisam-pirenena ny fikarohana tambajotra anjerimanontolo, ary ny Russell Group.
Mitovy amin'ny oniversite ny talohan'ny vanim-potoana maoderina, Glasgow nahita fianarana ireo mpianatra tany am-boalohany voalohany indrindra avy amin'ny mpanan-karena fiaviana, Na izany aza dia tonga mpisava lalana tany Britanika fampianarana ambony ao amin'ny taonjato faha-19 amin'ny alalan'ny koa ny manome ny zavatra ilain'ny mpianatra avy any amin'ny tanàn-dehibe sy ara-barotra mitombo saranga antonony. Glasgow University nanompo rehetra ireo mpianatra amin'ny alalan'ny nanomana azy ireo ho asa matihanina: ny lalàna, fanafody, asam-panjakana, fampianarana, ary ny fiangonana. Izany ihany koa ny fiofanana kely, fa tsy mitsaha-mitombo isa ny asany eo amin'ny siansa sy ny injeniera.
Tany am-boalohany miorina ao an-tanàna ny Avo Street, satria 1870 ny tena toeram-pianarana University efa hita tao Gilmorehill any Andrefana faran'ny tanàna izy. Ankoatra, maro ny oniversite trano dia hita any an-kafa, toy ny University Marine biolojika Station Millporton ny Nosy ny Cumbrae ao amin'ny Firth an'i Clyde sy ny Crichton Campus in Dumfries.
Alumni na ny teo aloha mpiasa ao amin'ny University dia ahitana filozofa Francis Hutcheson, injeniera James Watt, filozofa sy ny mpahay toekarena Adam Smith, fizika Tompo Kelvin, mpandidy Joseph Lister, 1St Baron Lister, fito Nobel laureates, ary roa British praiminisitra.
Ny Oniversiten'i Glasgow
dia laharana faha 62nd eto amin'izao tontolo izao ary ny voalohany sady tokana UK amin'ny oniversite mba ho naoty toy ny 5 Stars Plus ankapobeny. (QS World University Rankings 2015)
dia nahazo naoty fahatelo ao amin'ny UK fahafaham-po ny mpianatra iraisam-pirenena (amin'ny oniversite mandray anjara amin'ny Iraisam-pirenena Barometer Mpianatra Summer 2013)
mandray ireo mpianatra avy amin'ny mahery 140 firenena maneran-tany
maherin'ny 25,000 undergraduate ary nahazo diplaoma teny mpianatra
dia lehibe mpampiasa tao an-tanànan'i Glasgow maherin'ny 6,000 mpiasa, ao anatin'izany ny 2,000 active mpikaroka
manana vola miditra isan-taona fikarohana mihoatra ny £ 181m
dia mpikambana ao amin'ny malaza Russell Group ny fitarihana UK fikarohana anjerimanontolo
dia laharana faha-tampon'ny tany Ekosy sy fahatelo ao amin'ny Vondrona Russell tao amin'ny National Mpianatra Survey 2015
dia mpanorina mpikambana ao Universitas 21, iraisam-pirenena Grouping ny oniversite maneran-tany natokana ho mametraka fitsipika ho an'ny fianarana ambony
Tafiditra eo ny Alumni, ny Ray ny toe-karena Adam Smith, Ekosy ny mpanao mari-trano ny devolution Donald Dewar sy malaza fizika sy ny injeniera Tompo Kelvin.
College ny Arts
Nahazo diplaoma avy amin'ny Sekoly College ny Zavakanto
Sekoly Fianarana ny Critical
Sekoly Kolontsaina sy Creative Arts
Sekoly maoderina sy kolontsaina Fiteny
College ny Medical, Fiainana fitsaboina momba ny biby sy ny Siansa
School ny Medicine (anisan'izany ny Dentistry)
Sekoly ny Veterinary Medicine
College ny siansa sy ny injeniera
School ny Simia
Sekoly ny computing Science
Sekolin'ny Geographical Siansa sy ny Tany
Sekoly ny Matematika sy antontan'isa
Sekoly fizika sy ny Astronomia
College Siansa Sosialy
Sekoly Fianarana ny Interdisciplinary (amin'ny Crichton Campus, Dumfries)
Sekoly Sosialy sy ny Siansa Politika
Nandritra ireo dimy taona farany, sy ny maro hafa, efa niasa foana isika mba hanosika ny faritry ny inona no azo atao. Izahay efa-kevitra tamin'ny talenta fito Nobel laureates, iray ny Praiminisitra sy ny fitokanana Ekosy Minisitry Voalohany. Efa nandray izahay Albert Einstein mba hanome ny lahateny tany am-boalohany momba ny ankapobe momba ny fihetsehan'ny zavaboary. Ekosy vehivavy voalohany nahazo diplaoma ara-pitsaboana vita ny diplaoma eto 1894 sy izao tontolo izao ny sary voalohany fitarafana ny foetus dia navoakan'ny Glasgow Profesora Ian Donald in 1958. In 1840 dia lasa ny oniversite voalohany tany Angletera mba hanendry mpampianatra Engineering, ary amin'ny 1957, ny voalohany tany Ekosy mba manana solosaina elektronika.
Izany rehetra izany dia midika fa raha misafidy ny asa na ny fianarana eto, ianao ho mandeha araka ny dian'ny sasany eto amin'izao tontolo izao indrindra malaza fanavaozana, avy amin'ny mpahay siansa sy ny mpahay toekarena Kelvin Tompo Adam Smith, ny mpisava lalana ny fahitalavitra John Logie Baird.
Ny Oniversiten'i Glasgow dia naorina tao 1451 amin'ny alalan'ny Sata na ny papa omby avy amin'ny Papa Nicholas V, amin'ny soso-kevitra ny King James II, manome Eveka William Turnbull, nahazo diplaoma tamin'ny theUniversity ny St Andrews, alalana mba hanampy ny University ao an-tanàna ny Katedraly. Io no tranainy indrindra faharoa-oniversite tany Écosse taorian'ny St Andrews sy ny fahefatra-antitra indrindra ao amin'ny tontolo miteny anglisy. Ny anjerimanontolo ny St Andrews, Glasgow sy Aberdeen-piangonana dia fanorenana, raha Edinburgh dia olom-pirenena fototra. Amin'ny maha iray amin'ireo Fahiny Oniversite ny Fanjakana, Glasgow University dia iray amin'ireo valo ihany no andrim-panjakana ny mari-pankasitrahana undergraduate tompony diplaoma in sasany fitsipika.
Ny University dia efa tsy misy ny tany am-boalohany Bull hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-XVI. In 1560, nandritra ny korontana ara-politika niaraka theScottish Fanavaozana, ny avy eo Chancelier, Arseveka James Beaton, mpanohana ny antony Maria, nandositra tany Frantsa. Ary nitondra an'i, fa azo antoka-fitandremana, maro ny fitehirizan-taratasy sy ny zava-tsarobidy ao amin'ny Katedraly sy ny University, anisan'izany ny Mace sy ny Bull. Na ny Mace nalefa niverina tany 1590, ny tahirin-tsy. Principal Dr James Fall nilaza tamin'ny Parlemantera Commissioners famaliana amin'ny 28 Aogositra 1690, olona fa efa nahita ny Bull tao amin'ny Scots College ao Paris, miaraka amin'ny maro charters omena any amin'ny Anjerimanontolo ny ireo mpanjaka ny avy any Écosse James II tamin'i Maria, Queen ny Scots. Ny University nanontany ireo antontan-taratasy ao amin'ny 1738 saingy nampahafantarina ny Thomas Innesand ny lehibeny ny Scots College, fa ny firaketana an-tsoratra voalohany ny fototry ny University dia tsy mba ho hita. Raha tsy mbola very izany fotoana, tokoa izy ireo, dia naniasia nandritra ny Revolisiona Frantsay rehefa Scots College dia nandrahona. Ny firaketana an-tsoratra sy ny zava-tsarobidy nafindra ho azo antoka-fitandremana avy tao an-tanànan'i Paris. Ny Bull mitoetra ny fahefana izay ny loka University ambaratonga.
Fampianarana tao amin'ny Oniversiten'i Nanomboka tao amin'ny chapterhouse an'i Glasgow Cathedral, taty aoriana nifindrany tany teo akaiky teo Rottenrow, tao amin'ny trano fantatra amin'ny hoe ny “Auld fanabeazan'Andriamanitra”. Ny University nomena 13 hektara (5.3 manana) -tany an'ny Black Friars (Dominikana) amin'ny High Street avy Mary, Queen ny Scots, in 1563. Tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-17, ny trano University mifantoka amin'ny tokotany roa voahodidina mimanda zaridaina, amin'ny famantaranandro tilikambo, izay iray amin'ireo lafiny malaza Glasgow ny skyline, ary ny trano fiangonana nalaina avy amin'ny fiangonan 'ny teo aloha Dominikana (Blackfriars) friary. Sisa tavela amin 'ity trano Renaissance Scottish, tena ampahany lehibe lafin-trano ivelany, Nafindra ho any amin'ny fonenan'ny mpianatra Gilmorehill sy anarana toy ny “Pearce Lodge”, taorian'ny Sir William Pearce, ny fanamboaran-tsambo magnate izay famatsiam-bola ny fiarovana. Ny liona sy Unicorn Tohatra koa nafindra avy ao amin'ny oniversite taloha sy ankehitriny toerana tia ny Main Building.
John Anderson, raha voajanahary mpampianatra momba ny filozofia tany amin'ny oniversite, sy miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy fanoherana avy, ny asan'ny mpisava lalana ny fampianarana arak'asa ho an'ny lehilahy sy vehivavy miasa nandritra ny revolisiona indostrialy. Hanohy izany asa izany amin'ny sitrapony dia nanorina ny College Anderson, izay mifandray amin'ny anjerimanontolo alohan'ny Nampitambatra amin'ny andrim-panjakana hafa mba ho tonga amin'ny Oniversiten'i Strathclyde in 1964.
In 1973, Delphine Parrott ny vehivavy voalohany lasa mpampianatra, araka ny Gardiner Profesora ny fitandremam.
Tamin'ny volana Oktobra 2014, ny oniversite kianja nifidy ny University ho tonga voalohany tany Eoropa akademika rafitra mba divest avy amin'ny fôsily indostrian'ny solika.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Glasgow ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Oniversiten'i Glasgow ao amin'ny Map
Photos: University of Glasgow ofisialy Facebook
University of Glasgow Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Glasgow.